ကျိုင်းတုံ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်အား ကျိုင်းတုံလူငယ်ကွန်ရက် နှင့် ကျိုင်းတုံဂီတအစည်းအရုံးတို့မှ ကျင်းပမည် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
ကျိုင်းတုံ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်အား ကျိုင်းတုံလူငယ်ကွန်ရက် နှင့် ကျိုင်းတုံဂီတအစည်းအရုံးတို့မှ ကျင်းပမည်
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့ ဂီတအစည်းအရုံးနှင့် ကျိုင်းတုံလူငယ်ကွန်ယက်တို့ ဦးစီး၍ (၃)ရက်တာ တန်ဆောင်တိုင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို ကျင်းပပြီး လူငယ်စင်တာတည်ထောင်ရေးနှင့် ဂီတအစည်းအရုံး ရန်ပုံငွေရှာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ကျိုင်းတုံလူငယ်စင်တာတစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့ အတွက် ဒီပွဲကနေရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို မတည်ငွေအဖြစ် အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူခံပြီး စလုပ်တာထက်စာရင် ဒီလိုဟာလေးကနေစပြီးတော့ ကြိုးစားတဲ့ သဘောပါ။"ဟု ကျိုင်းတုံလူငယ်ကွန်ယက်မှ ကိုစိုင်းထွန်းလင်းက Tachileik News Agencyသို့ ပြောသည်။
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲကျင်းပရန် ငွေကျပ်(၅)သိန်းမှ ငွေကျပ်သိန်း(၃၀)အထိ ပံ့ပိုးသူ (sponsor) အုပ်စု(၄)ခုခွဲ၍ ရှာဖွေနေပြီး အဆိုပါ ပံ့ပိုးငွေများမှ ရန်ပုံငွေအဖြစ် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ဒီလူငယ်စင်တာဖွင့်ဖြစ်ရင် ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အဖွဲ့ အစည်းတွေကတော့ လာတော့မေးနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ နေရာ မရှိတာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲကနေရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်နဲ့ဖွင့်သွားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီစင်တာကနေပြီးတော့ ဒေသတွင်း လူငယ်တွေအတွက် ဗဟုသုတတွေ မျှဝေတဲ့ နေရာဖြစ်မယ်။ လူငယ်တွေကို သင်တန်းလာပေးမယ့် ဌာနတွေ၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေ အတွက် နေရာတစ်ခု ဖြစ်မယ်။ လူငယ်တွေ တွေ့ဆုံပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းပေါ့နော် လူငယ်ရေးရာတွေ ဆွေးနွေးသွားမယ်။"ဟု ကိုစိုင်းထွန်းလင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ပွဲကို မြို့နယ်အားကစားကွင်းတွင် နိုဝင်ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့မှ (၁၄)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပွဲကာလအတွင်း ပရိသတ်များ စနစ်တကျ အမှိုက်စွန့်ပစ်စေရန် လှုံ့ ဆော်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"အခုလက်ရှိမှာက ဒေသတွင်းက လူငယ်တွေက ပြန့်ကျဲနေပြီးတော့ ဟိုတစ်ဖွဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒီစင်တာ တကယ်ဖွင့်နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် လူငယ်တွေ စုစုစည်းစည်းနဲ့တွေ့ ဆုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘ၀တိုးတက်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်တာပေါ့။"ဟု ကိုစိုးလင်းအောင်က ပြောသည်။
တန်ဆောင်တိုင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွင် ရိုးရာလက်လုပ် မီးပုံးအလှပြိုင်ပွဲ၊ ရှမ်းချယ်ရီမယ်ရွေးချယ်ပွဲ၊ Mr. Fitness Star ရွေးချယ်ပွဲနှင့် တန်ဆောင်တိုင် အဆိုရှင်ပြိုင်ပွဲတို့ ကို ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း တိုင်းရင်းသား ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကအလှနှင့်ပြခန်းများ၊ ဒေသတွင်း လက်မှုပြခန်းများ၊ ကလေးလူကြီး မရွေးကစားနိုင်သည့် လောင်းကစားမဟုတ်သည့် ကစားနည်းများ၊ အသိပညာပေးပြခန်းများနှင့် ဒေသတွင်းလူငယ်များ ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာစေရန်အတွက် လှုံ့ ဆော်သည့်ကဏ္ဍများ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျိုင်းတုံလူငယ်ကွန်ရက်ကို အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်နေ့က စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည့် အဖွဲ့ အစည်းများတွင် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသူများ အပါအ၀င် အဖွဲ့ ဝင် (၂၈၀)ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရှမျးပွညျနယျ အရှပေို့ငျး၊ ကြိုငျးတုံမွို့ ဂီတအစညျးအရုံးနှငျ့ ကြိုငျးတုံလူငယျကှနျယကျတို့ဦးစီး၍ (၃)ရကျတာ တနျဆောငျတိုငျ ပြျောပှဲရှငျပှဲကို ကငျြးပပွီး လူငယျစငျတာတညျထောငျရေးနှငျ့ ဂီတအစညျးအရုံး ရနျပုံငှရှောမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
"ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ကြိုငျးတုံလူငယျစငျတာတဈခုကိုဖှငျ့ဖို့အတှကျ ဒီပှဲကနရေရှိတဲ့ အကြိုးအမွတျတှကေို မတညျငှအေဖွဈ အသုံးပွုသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အလှူခံပွီး စလုပျတာထကျစာရငျ ဒီလိုဟာလေးကနစေပွီးတော့ ကွိုးစားတဲ့ သဘောပါ။"ဟု ကြိုငျးတုံလူငယျကှနျယကျမှ ကိုစိုငျးထှနျးလငျးက Tachileik News Agencyသို့ ပွောသညျ။
တနျဆောငျတိုငျပှဲကငျြးပရနျ ငှကေပျြ(၅)သိနျးမှ ငှကေပျြသိနျး(၃၀)အထိ ပံ့ပိုးသူ (sponsor) အုပျစု(၄)ခုခှဲ၍ ရှာဖှနေပွေီး အဆိုပါ ပံ့ပိုးငှမြေားမှ ရနျပုံငှအေဖွဈ အသုံးပွုမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
"ဒီလူငယျစငျတာဖှငျ့ဖွဈရငျ ထောကျပံ့ပေးမယျ့ အဖှဲ့အစညျးတှကေတော့ လာတော့မေးနပွေီ။ ဒါပမေဲ့ နရော မရှိတာပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့ ဒီပှဲကနရေရှိတဲ့ အကြိုးအမွတျနဲ့ ဖှငျ့သှားဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။ ဒီစငျတာကနပွေီးတော့ ဒသေတှငျး လူငယျတှအေတှကျ ဗဟုသုတတှေ မြှဝေတဲ့ နရောဖွဈမယျ။ လူငယျတှကေို သငျတနျးလာပေးမယျ့ ဌာနတှေ၊ အဖှဲ့အစညျးတှေ အတှကျ နရောတဈခု ဖွဈမယျ။ လူငယျတှေ တှဆေုံ့ပွီးတော့ ကိုယျ့ရဲ့တိုးတကျရာ တိုးတကျကွောငျးပေါ့နျော လူငယျရေးရာတှေ ဆှေးနှေးသှားမယျ။"ဟု ကိုစိုငျးထှနျးလငျးက ပွောသညျ။
အဆိုပါ ပှဲကို မွို့နယျအားကစားကှငျးတှငျ နိုဝငျဘာလ(၁၂)ရကျနမှေ့ (၁၄)ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပ သှားမညျဖွဈပွီး ပှဲကာလအတှငျး ပရိသတျမြား စနဈတကြ အမှိုကျစှနျ့ပဈစရေနျ လှုံ့ဆျောသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
"အခုလကျရှိမှာက ဒသေတှငျးက လူငယျတှကေ ပွနျ့ကြဲနပွေီးတော့ ဟိုတဈဖှဲ့ ဒီတဈဖှဲ့ ဖွဈနကွတေယျ။ ဒီစငျတာ တကယျဖှငျ့နိုငျခဲ့မယျ ဆိုရငျ လူငယျတှေ စုစုစညျးစညျးနဲ့ တှဆေုံ့တာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘဝတိုးတကျရေး အတှကျ ဆှေးနှေးကွတာပဲဖွဈဖွဈ လုပျနိုငျတာပေါ့။"ဟု ကိုစိုးလငျးအောငျက ပွောသညျ။
တနျဆောငျတိုငျ ပြျောပှဲရှငျပှဲတှငျ ရိုးရာလကျလုပျ မီးပုံးအလှပွိုငျပှဲ၊ ရှမျးခယျြရီမယျရှေးခယျြပှဲ၊ Mr. Fitness Star ရှေးခယျြပှဲနှငျ့ တနျဆောငျတိုငျ အဆိုရှငျပွိုငျပှဲတို့ကို ထညျ့သှငျးကငျြးပသှားမညျဖွဈပွီး ဒသေတှငျး တိုငျးရငျးသား ရိုးရာယဉျကြေးမှု အကအလှနှငျ့ပွခနျးမြား၊ ဒသေတှငျး လကျမှုပွခနျးမြား၊ ကလေးလူကွီး မရှေးကစားနိုငျသညျ့ လောငျးကစားမဟုတျသညျ့ ကစားနညျးမြား၊ အသိပညာပေးပွခနျးမြားနှငျ့ ဒသေတှငျးလူငယျမြား ပရဟိတလုပျငနျးမြားတှငျ ပါဝငျလာစရေနျအတှကျ လှုံ့ဆျောသညျ့ကဏ်ဍမြား ပါဝငျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကြိုငျးတုံလူငယျကှနျရကျကို အောကျတိုဘာလ (၁၅)ရကျနကေ့ စတငျဖှဲ့စညျးခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ဒသေတှငျး လူမှုရေးလုပျငနျးမြား လုပျဆောငျလြှကျရှိသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားတှငျ ဦးဆောငျလှုပျရှားနသေူမြား အပါအဝငျ အဖှဲ့ဝငျ (၂၈၀)ခနျ့ရှိနပွေီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။